Dharaaro Xusuustood: “25 Sano Ka dib, Yoonis oo Weli Nabad Raadinaya!” Prof. Maxamed Siciid Gees | Aftahan News
Dharaaro Xusuustood: “25 Sano Ka dib, Yoonis oo Weli Nabad Raadinaya!” Prof. Maxamed Siciid Gees
December 6, 2018 | Filed under: Aragtida Bulshada,Qalinka Qoraaga,Qubanaha | Posted by: Aftahan News
Waa Ceerigaabo, waa bishii Ogost ee sannadkii 1993-kii, waa shirkii nabadaynta beelaha gobolka Sanaag. Ergo ka timi bariga Sanaag ayaan u soo horreynaa, waxaana laba xallaaf la noo dhigay qol ka mid ah hudheel dunsan oo xilligaas ku yaallay Ceerigaabo, waana aniga iyo mujaahid Maxamuud Cabdi Cali Bayr. Gidaarrada Hudheelka waxa ku qornaa; ‘Graffiti’ ama qoraallo lagu faygaray.
MAXAMED SICIID GEES TAXANAHA DHARAARO XUSUUSTOOD
Waxa mar caan ahayd hees ay qaadi jirtay marxuun Xaliimo Khaliif Magool oo ahayd; ‘Jacayl dhiig ma lagu qoray?’ Hadda sheekadu waxay ahayd; ‘Nacayb dhiig ma lagu qoray?’
Qoraallada qaar, ayaa dhiig ku qornaa oo aroor kasta aad ku xusuusanaysay godobta meesha taallay. Raashiinka iyo taakulada shirka waxa bixinaysay Hay’ad samofal ah oo la odhan jiray Somali Development and Relief Agency (SDRA) oo saldhiggeedu ahaa dalka Jabuuti oo ay wadeen xubno Reer Sanaag ah. Xilligaas hudheello cunto kama furnayn magaalada, haddii qoraxdu dhacdo meel wax laga iibsado iyo cunto ma jirin.
Cuntada bisil ee la heli jiray xilliyadaas waxay ahayd buskudka Abu Walad ee lagu samayn jiray dalka Yemen, kaasoo laga keeni jiray Boosaaso, buskudkaasna suuqiisu xaami ayuu ahaa oo daba-qabsi ayuu ahaa.
Yoonis-yare waa wiil 7 jir ah oo ilko dhacsaday, wuxuuna ka soo jeeda qoys reer Ceerigaabo ah oo caan ah, waana laba qof oo kaalin mug leh ka qaatay nabadda degaannada gobolka Sanaag. Yoonis-yare marka loo keeno buskudka oo lagu iibin jiray dukaan hooyadii ku lahayd gurigooda, ayuu dhawr xabbo noo soo qarin jiray aniga iyo Bayr, waxaannu odhan jiray; ‘Waar bahalkii aad ku noolaydeen ayaan idiin sidaa.’ KKKK.
Annaguna waxa aannu uga sheekayn jirnay sheeko xariireedkii Yoonis Tuug oo ku xanaakadayn jirnay. Yoonis-yare wuu garanayey qaxa, xabbadda iyo baro-kaca. Waxa uu ka sheekayn jiray islaan ay jaar ahaayeen oo saddex wiil lahayd oo laba ka mid ah ay ku dhinteen dagaalladii dhacay.
Sannadkan 2018 mar laga joogo saddex bilood ayaan warbaahinta ku arkay Yoonis oo shir Jaraa’id ku qabtay Ceerigaabo oo ka hadlaya heshiiska Ceel-Afweyn oo ka digaya in la qodqodo. Warkaas ayaa xusuus igu kiciyey oo aan sheekadan dib u millicsaday. 25 sano ka dib, ayuu Yoonis weli nabad ka raadinayaa Sanaag, isaga iyo kumanyaal la mid ihi. Maxaa dembi la iga galay oo hadda laga gelayaa carruurta soo koraysa. Waxa aan xasuustay heestii Cabdi Muxumed.
Waxa Caaqilku nooga sheekeeyey kaftan dhexmaray isaga iyo Maxamed Siyaad Barre, waxaannu yidhi; “Maxamed Siyaad Barre ayaan kulannay, markaas ayuu i weydiiyay waxa ka jira sheekada uu maqlay ee ah inaan caaqil u ahay dad ka soo kala jeeda beelo kala duwan oo Soomaali oo dhan ah oo HABAR-WADAAGTA la yidhaahdo. Waxaan u sheegay inay run tahay oo weliba uu Mareexaan ka mid yahay (waa ardaagii Siyaad Barre). Dabadeedna waxa uu igu yidhi oo sidee ayaad isugu waddaa anigu Soomaali isku wadi kari waayey eh? Waxa aan ugu jawaabay; sinnaan iyo caddaalad ayaa ii suurtageliyey. Waa igu qoslay.”
Maxamed Xaaji Ducaale waa ku af-gobaadsaday ee waxa uu u jeeday Siyaasi Soomaaliyeed ee aniga iyo Bayr ka mid ahayn, ayaa kolay burburinaya waxa la dhiso!!. Nin oday ah oo reer Jabuuti caan ah oo waxtar badnaa oo la yidhaahdo Andiwaa (Masiixi Ah) ayaa hadal kaas u dhow isna igu yidhi mar aan Jabuuti kula kulmay; “Halkan waxa igu soo mara siyaasi reer Somaliland ah oo ku dhaaranaya, waqti yar ka dib isaga oo federaal ah. Mid kale oo Puntland u ololaynaya, wax yar kadib isaga oo federaal ah, waqti dabadeed isaga oo Somaliland ah. Garaadkayga (Intelligence) ayey meel kaga dhacayaan ee dadka maxay moodayaan?” ayuu igu yidhi ninkaas Reer Jabuuti.
Marka taasi dhacdo, ayaa ciyaalku foodhi isku dari jireen oo wada oogsan jireen oo foodhyi jireen. Ma is-tidhi waxa Somaliland u baahan tahay cid ku foodhida siyaasiinta ku kaca hab-dhaqankaas ay ku daadefaynayaan wixii ay hore u qabteen ama u ololayn jireen ama siyaasiyiinta guur-guurta ee kolba dhinac ka soo jeedsada.